Ajụjụ - Azịza nye ajụjụ ugboro ugboro - Modellpilot.EU
Home Ajụjụ - Azịza nye ajụjụ a na-ajụkarị
Ajụjụ - Azịza nye ajụjụ a na-ajụkarị
Ebe ị ga-ahụ ajụjụ dị mkpa na azịza gbasara ojiji nke Modellpilot.EU na ọrụ ya. Ejiri FAQ ndị a maka gị n'okpuru:
Ajụjụ - Vidiyo • Ajụjụ - Mgbasa ozi Nkewa
Ajụjụ - Vidiyo
Ebee ka m nwere ike ịhụ vidiyo gbasara mmasị m?
Gaa na mmalite mmalite nke Modellpilot.EU. A na-ekenye vidiyo niile dị ugbu a na ndị metụtara Isiokwu edoziri na ọwa egosiri, ọwa 24 dị na kọlụm atọ na ahịrị asatọ maka mmasị gị n'isiokwu nke ịme ihe nlereanya na iji efe efe. Ọ bụrụ n’inwere mmasị, pịa ọwa kwekọrọ. A ga-eduzi gị na vidiyo ndị akọwapụtara ọwa. N’elu elu ị ga-ahụ ndepụta ọkpụkpọ egwu pụrụ iche yana usoro Enwere ike ịkpọ isiokwu nke vidiyo vidiyo ọ bụla n'ebe ahụ n'ihe metụtara isiokwu.
Ọ kwesịrị ka m banye dịka onye otu dịka tupu?
Mba, ihe niile dị n’ime nwere ike inweta ugbu a.
NDipMỌD:: Naanị ndebanye aha na-ewere ọnọdụ na nkewa ọkwa, nke na-edebanye aha mgbe ị debanyere aha, ị nwere ike itinye mgbasa ozi 8 n'efu.
Green mgbịrịgba, kedu ka m ga esi nweta ozi kacha ọhụrụ na desktọọpụ na mobile?
Nwere ike iji Ificationsma ọkwa maka mkpanaka yana maka desktọọpụ kwere.
Iji mee nke a, pịa akara mkpọchi na ihe nchọgharị thentanetị mepere emepe na-esote URL.
Ekwe ka ozi ndị dị na peeji a na popups ya.
Kwe ka POPUP na ngosi
Mgbe ahụ mgbịrịgba dị n'akụkụ aka nri ala nwere ike ịpị,
Ga-enweta nkwenye na ị na-anata ọkwa ugbu a, nke ị nwere ike gbanyụọ n'oge ọ bụla.
Enwere ngwa Modellpilot.EU?
Ọ bụrụ na gị na ya Kpọọ ngwaọrụ mkpanaka nke mbụ site na ihe nchọgharị Modntanetị Modellpilot.EU, Mgbe obere oge gachara, ozi pụtara na akuku aka nri banyere ntinye nke ngwa PWA Modellpilot.EU.
Mgbe echichi, ị ga-ahụ Modellpilot.EU icon maka kpọmkwem ohere ka ọdịnaya na gị ama, iPhone ma ọ bụ mbadamba.
Enwere m ike itinye mgbasa ozi na saịtị ahụ?
Modellpilot.EU anaghị enye mgbasa ozi ọ bụla.
(E nyere ngwa ọrụ maka mgbasa ozi dị ka ihe nkiri ma ọ bụ njikọ njikọ vidiyo na vidiyo, biko kpọtụrụ anyị)
Ọ bụrụ na ị nwere WMkpebi pụtara ma vidiyo, ederede ma ọ bụ onyonyo nwere njikọ dị na ụlọ ahịa gị ma ọ bụ weebụsaịtị maka nnweta na ahịa chọrọ ijikọ yabụ ị nwere ike ijide ya n’okpuru nchịkwa ọbụlagodi Mgbasa ozi Google. Otu nchịkọta akụkọ ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịtọlite.
Ntọala ahụ na-ewere ọnọdụ Ntinye maka nnyefe nke mgbasa ozi gị na adreesị ndị a:
Maka arịrịọ pụrụ iche maka mmalite ngwaahịa ma ọ bụ mgbasa ozi mmemme,
Kpọtụrụ anyị kpọmkwem site na ekwentị: 0049 30 39885788 ma ọ bụ Ama (na) modellpilot.eu
Modellpilot ole ka ogologo oge.EU nọ anọwo na gịnị bụ nghazi ahụ?
Modellpilot.EU dị adị kemgbe 2007/2008 ma nwee ezumike nka nka n’afọ otu n’afọ 2019.
Im September 2020 emegharịala Portal mgbe otu afọ nke ọrụ mmepe gasịrị. Oge agbanweela ebe ọ bụ n’afọ 2008, mgbe foto bidoro ịgba ọsọ / Flash bụ naanị usoro onyonyo na mkpebi nke 360 ​​ruo 280 yana oge ịgba ọsọ 50 nke oge ịntanetị gbanwere nke ukwuu. Ndị na-adịgide adịgide Ndozigharị kemgbe 2008-2018 na teknụzụ ọhụụ na ohere nwee nkwenye Akụnụba nke ahụmịhe nke bu ntọala nke Modellpilot.EU ya na ihe omuma na ikike nke oha na eze n ’efu n’okwu gbasara ugbako ihe nlere na ihe nlere, ihe emere n’adighi ike ma sigharia n’uwa dum.. Stefanu Eich, onye guzobere Modellpilot.EU kemgbe 2008 na site na 2013 ya na ndị ọrụ ya na-enweta ọbụbụenyi na nkwado nke ọtụtụ ndị ama ama na-akwado ntụkwasị obi site na ụlọ ihe nlereanya na ebe ihe nkiri na-efe efe. Ndị na-emepụta ihe na-eji Platform nwere oke chọrọ na mma iji gosipụta gị ụdị na ngwaahịa. Niile nyocha ule emeela ka ngwaahịa dị maka ahịa dị iche iche, ọ ghọrọ ya otu nyocha a na-anwale ihe ngosipụta na ịme ihe nlereanya. Stephan Eich bụ injinia gụsịrị akwụkwọ. ya onwe ya bu onye okacha amara nke na emebi ihe ulo na onye okacha amara nke ugbu a bu akwukwo akwukwo di omimi: - Drones - Teknụzụ na Iwu nwere 550 Reguvis (Bundesanzeiger Verlag). Dịka onye ode akwụkwọ na onye nchịkọta akụkọ, ọ bụ ya na-arụ ọrụ maka Nkà na ụzụ nke 1.
Seine Nlere ule anatụghị ele mmadụ anya n'ihu, akwụkwọ na edemede ọkachamara na - enwe ezigbo aha na ntụkwasị obi.
Edeela isiokwu ya na vidiyo ya na nkesa mgbasa ozi n'ozuzu ya na nke ụwa niile maka ọhụụ RC na akụkọ ngwaahịa maka imepụta ihe nlereanya na efe efe kemgbe 2008.
Kemgbe ahụ, Modellpilot.EU etolitela n'ụdị ụdị a dị ka ọnụọgụ nke 1 n'ụwa niile ma mepụta aha na ntanetị ma merie otu ebe n'ime obi ndị na-anya ụgbọ elu na ndị nrụpụta.
Kemgbe Septemba 2020, Modellpilot.EU anọghịzi na atụmatụ ochie ya ma nwee ọhụhụ ọfụma maka abamuru nke ndị ọrụ niile ma bụrụkwa onye na-akwụghị ụgwọ maka vidiyo na ederede nkọwa, usoro, isiokwu ndị ọkachamara na nke ahụ n'ihe karịrị 2.000 subpages. A na-asụgharị peeji niile ugbu a n'asụsụ iri anọ na iji AI neural. Ngwa nchọta niile dị na ụwa ma e wezụga Chinese BAIDU depụtara ibe ndị a Modellpilot.EU na maka asụsụ niile. N’ezie, ibe niile dị n’asụsụ ndị a bụ igwe nchọcha SEO na-ebuli elu ma na-aza ya.
Enwere ike ugbu a na ntanetị ịntanetị. Nwee obi ụtọ na ọrụ ahụ ma nwee ọtụtụ ihe.
N'agbanyeghị nke ahụ, nde mmadụ nde 3,1 kwa ọnwa naanị site na mba ndị na-asụ German bụ nnukwu azịza nye ọdịnaya ahụ. kedu ihe ga - ekwe omume n’afọ 2020?! Anyị na-ekwe ka anyị ju anyị anya.
Modellpilot.EU na-akọwa ụzọ ndị dị ugbu a na ntanetị, nke n'ụdị a, dịka ọ dị na mbụ, bụ ebe a na-ere ere pụrụ iche. YouTube naanị Channel kenyere kwa ọnwa otu ruo ọtụtụ nde playback nkeji kwa ọnwa na-enweghị saịtị Modellpilot.EU. Nke mere na vidiyo RC ndị a mara mma na-enwe ohere dị mma site na 1-2-3 pịa na isiokwu achọrọ, a kwadebeere vidiyo niile dị na isiokwu maka gị ma enwere ike ịlele ya n'efu. Ghọta ọrụ anyị na ọbịbịa gị, ndị ọrụ Modellpilot.EU daalụ.
Mgbasa ozi ahụ na-enyere aka idobe saịtị ahụ na ọnụahịa dị elu maka ịrụ ọrụ na ndozi ya, yabụ gbochie mgbasa ozi na-akwado ihe nchọgharị. Nwee obi ụtọ ịlele saịtị ahụ, anyị na-eme ike gị na obodo anyị.
Ajụjụ - Mgbasa ozi Nkewa
Ajuju ajuju banyere mgbasa ozi nkewa apuru n’okpuru uzo a: Ajụjụ ndị a na-ajụkarị